Tag: bulsho | Martech Zone
Khamiista, Febraayo 28, 2013 Isniin, February 1, 2016 Douglas Karr
Maanta waxaan la qaatay maalin wacan kooxda websaydhka ee liiska Angie. Liiska 'Angie's List' wuxuu u kobcinayay bogooda maktabad maktabad cajiib ah… iyo in kasta oo ay sii wadeen xawaareynta degelkooda. Boggooda waxay ku shuban xawaare indho la'aan ah. Hadaadan i rumaysanayn, ku soobaal boggan Albaabbada Garaashka. Boggu wuxuu isku daraa sawirro, fiidiyoow, iyo badhannada bulshada… welina wuxuu ku raran yahay milliseconds. Isbarbardhiga boggooda iyo kuwaygaygu waa sida tartanka oo kale
Vimeo waxay kasbatay Suuqa Suuqa Fiidiyowga: Isu socodka 269%
Axad, Sebtembar 12, 2010 Isniintii, September 13, 2010 Douglas Karr
Dhawaan, waxaan baaritaanno badan ku sameeyay fiidiyowga macaamiishayda. Fiidiyowgu wuxuu noqonayaa qayb weyn oo ka mid ah waayo-aragnimada khadka tooska ah; runti, waxaa jira fursad wanaagsan oo bartaada internetka ay gebi ahaanba ka boodi doonto boqolkiiba wanaagsan oo soo booqdayaasha ah mooyee inaad fiidiyoow bixiso. Telefoonada casriga ah ee casriga ah ayaa sidoo kale lagu hagaajiyay fiidiyowga iyo daawadayaasha ayaa qaylinaya. Youtube horeyba waa mashiinka labaad ee ugu weyn raadinta internetka. Laakiin barnaamijyada kale ee fiidiyowga ayaa ah